Damiirka xanuunsanaya ee Muslimiinta: Waa in dib-loo-helo Islaanimo aan takoor lahayn – Radio Daljir
Damiirka xanuunsanaya ee Muslimiinta: Waa in dib-loo-helo Islaanimo aan takoor lahayn
Febraayo 25, 2018 3:37 g 0
Dunidii Islaanku si daran bay u kala qaybsantahay. Dagaalo sokeeye oo koox-koox iyo firqo-firqo la isaga horyamid baa ka qarxaya Siiriya, Ciraaq, iyo Liibiya. Yamen ayana waxaa ka taagan xaalad bini’aadanimo maanta tii dunida ugu xumeyd, kana dhalatay dagaal kii ugu xumaa kaas oo Sacuudigu garwadeen ka yahay — waa Sacuudigii iimaanka Islaanku calankiisa ku xardhanaa, ayna ku yaalliin labada masaajid ee barakeysan. Afqajistaan, Nayjeeriya, Maali iyo Soomaaliya ayana waxaa ka socda kacdoono xagjir ah.
Dalka danbe asagu waaba mid tilmaan u ah habka isburburinta iyo musuqmaasuq aan xudduud laheyn. Waa ’tilmaan juquraafi’ oo kaliya, laakiin noqday dal aan lahayn aragti, madaxbannaani, iyo wax la dhihi karo qaranimo toona. Waa dal qani ku ah kheyraadka, laakiin magac-u-yaal u noqday murugo aan dhammaan. Waa dal maskax ahaan lala wareegay, ruux ahaana noqday qaran fadhiid ah oo mar kasta siyaasad ahaan qota bohoshii uu ku dhici lahaa.
Soomaaliya waxaa la dhihi karaa waa mid matasha oo waa muraayad laga dhex arko xaalka cakiran ee dunida Islaanku maanta ku suganyahay.
konton-iyo-todoba dal oo dhammantood xubno ka ah Ururka Dowladaha Islaanka ayaa waxa ay wada yihiin daawadayaal iyo kuwo aan waxba ka qaban karin xasuuqa lala beegsanayo dadka Muslimiinta ee Roohingaha, tirtirka iyo laynta dadka reer Falastiin, iyo dhulkii barakeysnaa oo lala wareegay.
Intaas kaliya ma aha e Muslimiintu waxa ay qarniyo ahaayeen kuwo dib-u-socod ah oo looga dheereeyey fikirka iyo hal-abuurka, taknoolajiyadda, xasiloonida siyaasadeed, xukun-wanaagga, iyo waliba xuquuqda bani’aadanimo. In Muslinku soo kabto, ka soo kabto ceebta ku habsatay iyo rajo-la’aanta maanta haysata waa mid u baahan in loo helo muraayad weynan badan oo na tusta foolxumada nagu habsatay, dhan kasta. Haah oo isweydiin ma leh in shisheeye iyo warxume ay qayb ka yihiin foolxumada na haysata. Laakiin ogoow oo kaliya markii la saxo sababaha keena dhibka gudaha ka taagan, baa kan bannaanka ka yimaada loo soo jeesan karaa, deedna la sixi karaa.
Way adagtahay in Muslinku iska indhatiro sida ay isku shabbahaan waqtiga maanta la joogo iyo kii Nabi Maxamed uu saadaaliyey; waqti dowlado ay isku habar-wacan doonaan oo dhan kasta Muslinka kaga wareegi doonaan si loogu damaashaado feenashadooda. Markii la weydiiyey, maxaa taas sababaya ma yaraanta dadka Muslinkaa, Nabigu waxa uu ku jawaabay: ‘Maya, oo waad tiro badan doontaan.’ Nabiga oo sii wata waxa uu yiri, laakiin tayada astaamaha anshaxiinu waxba kama duwanaan doono xumbo kacsan. Waxaa idin ku habsan doona ‘wahan’ ama jaceyl xad-dhaaf oo aad u qabtaan mudnaanta, qadarinta iyo raaxada, iyo waliba cabsi xooggan oo aad ka qabi doontaan wixii intaas idin dhaafin kara.
Magaalada Dubai – taas la dhalaaleysa danbiyada astaamaha u ah anshax-xumooyin kuwa ugu liita ee galmo, bakheylnimo, iyo cunto-cun xad-dhaaf ah, jiritaankeeduna uu ku tiirsanyahay ciidamo shisheeye oo la soo ijaartay – baa maanta Muslimiinta u ah hormar kan ugu sarreeya ee la hiigsado. Dhanka kale, taas baddelkeeda waxaa weli shaqeeya noocii kale ee ahaa in cudud lagu helo mudnaanta inta yar ee xukunka haysa oo laga miiranayo ummadda inteeda kale.
Tobaneeyayaashii sano ee danbe, dunida Islaanku waxa ay soo saartay kaligitaliye kan ugu xun, uguna musuqmaasuq badan, kaas oo dalkiisa u burburiya in uu sadbursi, awood iyo mudnaan shakhsi ku helo, illaa shacabku inta ay qaadi kari waayaan uu dulqaadku ka dhammaado. Cali Cabdalla Saalax ee Yemen waa tusaalihii ugu danbeeyey noocaas aad u liita ee kaligitaliyaha ah oo ugu danbeyntii inta shacabkii dulqaadku ka dhammaaday ay bulaacada taariikhda ku biyoraacsheen.
Cabburinta Aqoonyahanka iyo Caqliyahanka
Dhowr tobaneeye sano oo kaliya dhimashadii Nabi Maxamed kabacdi, taxane hoggaamiyayaal Muslimiin ah oo sifo sharci ah aan hoggaanka ku kasban baa waxa ay bilaabeen in ay dallacaan wadaado jilayey wadaadnimada, waxa kaliya ee laga rabeyna ay aheyd in ay fatwoodaan oo ay meelmariyaan quraafaadka hoggaamiye-ku-sheegga kaligitaliyaha ah ee wadaadka jilaaga ah meesha keensaday. Taasi waxa ay dhashay in koox-koox si indho-la’aan ah la isu taageero, waddaniyad aan jirin afka laga sheegto, ummadana been lagu maaweeliyo, oo la isticmaalo.
Maanta, badi aqoonyahanka iyo caqliyahanka Muslinku waa wada af-maran, waa guulwade, ama dabtuure nooca al-assabiyyah, ahna nooc firqadiisa ama koox-diimeedkiisa u jajaban (Sunni, Shiica, Suufi, IWM.), taageersan fikirkiisa (Xanafi, Maaliki, Shaafici, Xanbeli, Jacfari, IWM.), ama taageersan diin-siyaasadeedkiisa (Salaafi, Ikhwaani, Xuuthi, Islaaxi, IWM.).
Haddii xaal saas yahay, laba arrimood oo muhiim u ahaa hormarkii Islaanka ee kal hore baa maanta daxaleystey ama maareystey: run raadis dhab ah iyo Ijtihaad.
Ijtihad waa nidaamka maareynta-fikirka sifo loo helo macne ama loo qeexo fasiraad ammuur ka dhexjirta xuduudaha anshaxa iimaanka. Qarni kahor, Allama Maxamed Iqbal waxa uu uga digey maskaxda la gumaystey ee ummah in aan la cabburin baadigoobka aqoonta dunida Islaanka. “Albaabka fasiraaddu (ijtihaad) ma aha mid quful lagu xiran karo. Maxaa yeelay albaab mar hore Quraanka iyo Sunnuhu ay fureen ma aha mid cid kale xiran karto.” Iqbal waxa uu ku celceliyey waxa Muslimiintu mar hore illaaween: Isweydiinta ruuxiga ahi iyo baadigoobka macnaha macquulka ahi waa mid Alle ogolaadey oo ah nidaam aqoonta lagu helo, cilmigana lagu siyaadsado.
Aqoonyahanka iyo caqliyahanka dhabta ah ee Muslinku waa midka ay dhiirigaliso raadinta runta iyo hormarinta wanaagga umadda. Ma aha kuwo u nugul awood raadin, maal ama mudnaan.Waajibkooda koowaad waa in ay shacabka wax u iftiinshaan, awoodda kuwa xukunka haya si miisaan leh u hubiyaan, ayna ummadda ka ilaaliyaan in aan xeerada salkeeda la soo taaban oo sharcigu uusan burburin.
Inkasta oo dunida Islaanku, siiba Bariga Dhexe, ay tahay xudduntii siyaasadda iyo tartanka istaraatajiyada ama khayraatka tamarta, hadana saas oo ay tahay, hoggaamiyayaasha Muslinku wax saameyn ah oo danta qaranka ay ku hormariyaan ma laha, iskaba illoow in ay dunida inteeda kale saameyn dhab ah ku yeeshaan e. Badankoodu waa waxmatarayaal labajeeblayaal ah, siyaasadooda dibadana ay curyaamisey kalsooni darro, tooda gudahana dhaafin waayey tii kaligitaliyaha. Haddii hoggaamiyahaas kaligitaliyaha ah kursiga loo daayo, mudnaanta loo dhowro, oo magacooda iyo sawirkooda la weyneeyo oo la qadariyo, danta qarankoodu wax laga tashado waa tan ugu danbeysa.
Haddii Gugigii Carabtu ahaa mid muujiyey afkaarta shacabka ee looga horyamid xadgudubka awoodda kaligitaliska, mid dhaqaale takoor iyo musuqmaasuqba, dhammaan cuduradaas aan waxba reebin weli waa sidoodii, cuduradaas qaarna dhulka Carabta iyo dunida islaanka waaba ka sii dareen. Taas danbena waxaaba tusaale u ah dhacdada Maxamed Bin Salmaan ee Sacuudi Carabiya.
Maxamed Bin Salmaan oo la dhihi karo maanta waa Boqorka dhabta ah ee dalka ka taliya, waxa uu yeeshay awood aan dheelitir laheyn oo dalka Sacuudiga qarka u saartay siyaasad burbur. Waxa uu hagey dagaalka lagu halaagmey ee Yamen, hub-iibsiga aan miyirka laheyn ee khasaarinaya khasnadda dhaqaalaha Sacuudiga, iyo waliba xannibaada Qadar. Waxa uu xiray tiro culimo ah, ammiiro, warfidiyeeno, iyo wixii xirfadlayaal ahaa ee xukunkiisa kaligitaliyenimo su’aal ka keeni karay. Dhammaantood ayaga oo midkoodna aan maxkamad iyo sharci toona la horkeenin baa hal maalin la yiri waa wada dambiilayaal.
Intaas kaliya ma aha e, Boqrane Maxamed waxa uu shaaciyey olale kahortagga-musuqmaasuqa, waxa uuna dalka dul dhigey dhaqaale-suun-dhex-ku-xir, meesha uu asagu jeebka dowladda suu rabo u isticmaaley, ha ahaato guri dunida uga qaalisan oo uu ka gatay Faransa, kana bixiyey $300 milyan doolar, doon raaxo oo ayana uu ku gatay $500 milyan doolar (nus bilyan doolar) iyo masawir uu ka bixiyey dhaqaale dhan $450 milyan ama wax u dhow nus bilyan doolar.
Dhanka kale waa Masar iyo Turki oo ayana ciddii mucaarad ah ama mucaaradnimo laga dareemo xabsiga dhiga. Taasina ma aha mid diinta Islaanku raalli ka tahay.
Isweydiin ma leh in Muslimiintu ay ka fogaadeen mabaadiidii anshaxa suubbanaa oo Nabi Maxamed iyo asxaabtiisa ku hoggaanshey in ay adduunka badalaan, dhidbaanna ilbaxnimo dunida wada gaartay.
Mabaadiidaas waxaa lagu soo koobi karaa lix qodob:
Caddaalad iyo sinnaan aan leexleexad laheyn. Waa laga yabaa in dad badan sheegtaan in ay hammigaas gaareen, laakiin dadku runtii ma awoodaan ilaalinta caddaaladda iyo sinnaanta illaa ay ka oggolaadaan in Eebbe yahay kan kala xisaabtamaya mabaadiisaas. Kii qirta in uu hoosyimaado Eebbe xukunkiisa baa laga yaabaa in uu asna ilaasho xuquuqda ummadda kale.
Hiigsiga darajo tan ugu fiican ammuur kasta, iyo in aad ummadda inteeda kale qaab kan ugu fiican ula dhaqanto. Haddii aad saas yeesho, saas ula dhaqanto kuwa adiga kaa duwan ama rumeysan oo aaminsan mabda’ iyo diin taada ka duwan, la dhaqankoodu aad buu u sahlanaanayaa
Masuuliyadda ku saaran si dhab ah u wajah, dadkana u naxariiso oo u faa’iidee. Qoysku waa jaranjarada koowaad ee dhidbidda bulsho, haddii aad gudato masuuliyaddaada qoys waxa aad u faa’iideysay bulshada oo dhan, oo culeyskii qoyskaaga baad bulshada ka dulqaadey.
Ka fogoow oo kahortag musuqmaasuq nooc kasta, mid anshax, maal, siyaasad, bulsho-burbur (dhaqan-xumo) iyo danbi nooc kasta oo adiga iyo bulshadaba dhaawici kara
Ka fogoow oo kahortag taxaddar-la’aan iyo dhaqan-xumo nooc kasta oo keena bulsho-burbur horseedi karana anshax-xumo baahsan
Ka fogoow oo kahortag dhammaan xadgudubyada lidka ku ah doonista iyo awaamiirta Eebbe amaba lidka ku ah ummadda inteeda kale
Mabaadiidaas asaasiga ah ee ku cad aayadda Quraanka waxa ay ku dhaqangaleen nidaam dowli ah oo dhiirigaliyey, ilaaliyeyna ujeedooyinkii loola danlahaa ee: qaayaha nolosha, iimaanka, hantida, qoyska iyo maal-maskaxeedka ku yimaado garasho iyo caqli.
Nabi Maxamed waxa uu mar kasta ogaa xaqiiqada ah in aan innaba la dhidbi karin xiriir aan lagu wada faa’iidin. Xiriirka jiritaanka lihi, gude iyo dibadba, waa mid ku dhisan is-aamin, anshax wanaag iyo isku-tanaasul.
Waa abuuris Eebbe in dadku isweydiiyaan oo baaraan macnaha nolosha. Sidaas darteed, jiritaanka qofku, illeen dadku waa kuwo caqli saaxiib u ah e, waa mid abbaara isweydiinta iyo ka gungaarka macnaha nolasha, mid anshax iyo maalba. Waa shaaggii wareejinayey nidaamka markale-qiyaaska iyo markale-tarjunka hadba marxaladda taagan. Bulshadii ku guuldareysata in ay dib-u-qiimeyso aragtideeda bulsho, siyaasadeed, dhaqaale, iyo mid ruuxi ahba, lana jaanqaadi weyda isbaddalka joogtada ah ee jiilba-jiil iyo tartanka aan joogsiga laheyn ee dunida ma aha mid rajo leh, waana bulsho burbur qarka u saaran.
Diinta Islaanku waa iimaan caalami ah. Sidaas darteed, wada-dhaqanka, isdhexgalka iyo iskaashiga dunida inteeda kale waa masalo rabbaani ah, waajibna ku ah qof kasta oo Muslin ah. Taasina waxa ay suurtgal noqon kartaa oo kaliya markii aan baddalno aragtideena qof ahaaneed iyo teenna guudba. Aayado badan oo Quraan ah baa hoosta-ka-xarriiqaya muhiimadda isticmaalka maanka iyo garashada maskaxda, kana digaya firqa-fikirka iyo iskooxaysiga indhala’aanta ah.
Waxaa la gaaray waqtigii Muslinku dib-u-kasban lahaa Islaanimo aan takoor lahayn taas baana badali karta dad qalbi-jabey, qowmiyado, qabiilo, iyo qaranno. Waxaa la gaaray waqtigii dib-loo-soocelin lahaa dhaqankii Islaanka ee ku salaysnaa marka hore fikir la imoow deedna ku dhaqaaq; marka hore qalbiga taabsii dabadeedna maanka gaarsii, inta aadan isbaddal isku dayinna marka hore ujeedada dadka ka dhaadhici. Hadaba Muslinoow fikir la imoow oo talo dhaxal-gal ah qorshee ama si fudud u baa’ba.
>>> …………………………………………………………………………. <<<
Abukar Arman waa qoraa, diblomaasi hore, waana bulsho-u-adeege falaanqooyinkiisa siyaasadda adduunka iyo diinta aad loo daabaco, loona daalacdo. Qoraaladiisa ka dheeho Foreign Policy Association http://foreignpolicyblogs.com/author/abukararman/
Abukar Arman is a writer, a former diplomat and an activist whose work on foreign policy, geopolitics and faith is widely published. He also blogs at Foreign Policy Association http://foreignpolicyblogs.com/author/abukararman/
Shimbirta Abukar: Abukar Arman
Maqaalkan markii hore waxa uu ku soo baxay THE MUSLIM VIBE, asaga oo ku qoran afka Ingiriiska hoos ka daalaco:
The ailing Muslim conscience: It’s time to reclaim the Islam of inclusivity
Siyaasadda & Dhaqaalaha 490 Wararka 23992
Saraakiil ka tirsan Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda DFS oo Tababar logu qaaday Tanzania